अलिफको ‘छुँदिन म जाले रुमाल’ - नेपालबहस
अलिफको ‘छुँदिन म जाले रुमाल’
| १२:४५:४० मा प्रकाशित
६ फागुन, काठमाडौं । अलिफ खानको ‘छुँदिन म जाले रुमाल’ सार्वजनिक भएको छ । संगीतकार अर्जुन पोखरेलसँग सहकार्य अलिफले बजारमा लिएर आएका हुन् । नारायण काइलोको शब्द, अर्जुन पोखरेलको संगीत र अलिफ खानको स्वरमा यो गीत तयार भएको हो ।
गीतको भिडियोमा इन्जामम अली खान र श्रेया सिटौलाले अभिनय गरेका छन् । भिडियोमा निर्देशक विधान कार्कीले गायक अलिफलाई पनि प्रशस्त स्थान दिएका छन् ।
विकास दाहालको सम्पादनमा तयार भएको यो भिडियोमा उत्सव दाहालको छायांकन छ । यो गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको ४ दिन भयो । ४ दिनमा गीतको भिडियोलाई ३ लाख ४० हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । दर्शकले गीतमा अलिफको स्वरको तारिफ गरेका छन् ।
यो गीत सार्वजनिक भएको ४ दिनसम्म हेर्दा, औषत नै चलिरहेको छ । तर, गीत विस्तारै दर्शकको मनमा बस्ने विश्वास यसका संगीतकार अर्जुन पोखरेलले गरेका छन् ।
वृद्धा सासुको सम्पत्ति लिएर हेरचाह नगर्ने सुष्माका श्रीमान पक्राउ ३ मिनेट पहिले
नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर बुधबारदेखि बन्द हुने ३ दिन पहिले
पर्वतमा १५ दिनका लागि सवारी आवागमन बन्द ४ हप्ता पहिले
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण चैत मसान्तसम्म बढाउने २ हप्ता पहिले
पुनःस्थापित संसदलाई सरकारले कहिलेसम्म ‘बिजनेस’विहीन बनाउने हो ? २ हप्ता पहिले
गरिमा विकास बैंकको अध्यक्षमा बस्याल चयन, अन्य सञ्चालकमा को को भए निर्वाचित ? २ महिना पहिले
जुम्ली मार्सी चामल जापानी बजारमा १ महिना पहिले
उपत्यकामा थप ९ जनामा कोरोनाको पुष्टि १० महिना पहिले
हिउँदे झरीसँगै उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ १ वर्ष पहिले